November 10, 2019 - ThutaSone
November 10, 2019 ThutaSone 0
တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မယ်ဇလီဖူးသုပ် စားရခြင်းအကြောင်း တန်ဆောင်မုန်းလအခါတွင် ဆေးပင်အပေါင်းကို စေါင့်သောနတ်တို့သည် မယ်ဇလီပင်စေါင့်နတ်မင်းအား တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း လာရောက်ခစားကြသည်။ မယ်ဇလီဖူးကို စားသုံးခဲ့သော် ၊(၉၆)ပါးသော ရောဂါများကင်းရှင်း၍ ဘုန်းကြီးအသက်ရှည်နိုင်သည် ဟု ၊“သာရကောမုဒိ” ဆေးကျမ်း ကပြဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၊ မြန်မာ့ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် အခါသမယတွင် ၊မယ်ဇလီဖူး ကိုအဆာစုံစွာသုပ်၍ […]
အထူးသတိပေးချက် အမရပူရမြို့ နန်တော်ရာစံပြကွက်သစ် ငါးဆယ်တစ်ကြိမ်‌မြောက် ပွဲတော်မှာ စွမ်းသဘင် ကို ငှားခဲ့ပါတယ် စံရန်ကိုလဲ တောင်းတဲ့ သိန်း( 50 ) ချပေးခဲ့ပါတယ် ပွဲတော် သုံးရက် ငှားရမ်းခဲ့ရာမှာ ကြားရက် ပွဲကူးရက် မရှိသဖြင့် ထက်တိုးဖို့ ပြောဆိုတဲ့ အခါမှာ နောက်တစ်ရက် ထက်တိုးပေးခဲ့ပါတယ် […]
နုပျိုနေစေမယ့် ဂျပန်ရိုးရာ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းလျို့ဝှက်ချက် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဘယ်သူမှ မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လွယ်လွယ်နဲ့ အသားအရေမပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းနည်းလျို့ဝှက်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ပျိုမေတို့ တချို့အမျိုးသမီးတွေကို မြင်ဖူးမှာပါ။ အသက် ၅၀ ကျော်တာတောင် ၂၀ ကျော်အရွယ်လို လှနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက သူတို့ရဲ့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းလို့ပါ။ ဒါကြောင့် […]
ဒီဇင်ဘာလမှစတင်ပြီးလက်ရှိထုတ်ဝေနေသော တန်ဖိုးမြင့်ငွေစက္ကူအချို့ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံများဖြင့် စတင်ထုတ်ဝေသွားတော့မှာပါ အခုထုတ်ဝေတဲ့ထဲက တန်ဖိုးကြီးငွေစက္ကုတစ်ခုကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပဲုနဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်ဝေသွားမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဌ က ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ငွေကျပ်တစ်သောင်းတန်နှင့် ငါးထောင်တန် ၂ ခုထဲကတစ်ခုကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနှင့်ရိုက်နှိပ်နိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များကခန့်မှန်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ယခုကဲ့သို့ပြောင်းလဲရိုက်နှိပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖြစ်လာနိုင်ခြေမရှိကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတစ်ခုအနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ပုံဖြစ်သည့်အတွက် ပိုမိုသင့်တော်ကြောင်း စီးပွားရေးကညာရှင်များနဲ့ ဘဏ်အရာရှိများက သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြတာပါ […]
ဂါထာတွေ မန္တန်တွေဆိုတာ ဟိုးရှေးခေတ်အခါတည်းက ရှိခဲ့တာပါ….တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ ဂါထာတွေကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေရရှိခဲ့တာတွေရှိသလို ထူးခြားမှုတွေ ကြုံရတာလည်း ရှိပါတယ်…မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ကုသိုလ်ကံကကောင်း ယုံကြည်စွာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ ဂါထာကလည်း အစွမ်းထက်ဆို မိမိအတွက် အလွန့်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေတာပါ… ခုဖော်ပြမဲ့ ဂါထာလေးကတော့ ငွေဝင်ငွေပြည့် ချမ်းသာစေတဲ့ ငွေဝင်ဂါထာလေးပါပဲ…. တစ်လလုံးမှာမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ဆိုရတာပါ…..လတစ်လရဲ့ […]
“ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး မြန်မာ စကားလုံးများ” ခုခေတ်သုံးနေကြတာနဲ့ လွဲနေပါတယ် BG | November 9, 2019 | Knowledge | No Comments “ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး မြန်မာ စကားလုံးများ” အင်္ဂလိပ်စကားမှာ brother ဘရားသားလို့ ဆိုရင် ညီလား? အကိုလား ? […]
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကို မူးယစ်ဆေးဝါး သံသယရှိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာကို အားလုံး သတိရကြဦးမှာပါ။ ဒီအတွက် ပရိသတ်များလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသလို ၊ ဖြိုးပြည့်စုံကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာရှင် မောင်နှမအားလုံးကလည်း အထူးပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် […]
ဟော့ပေါ့အဝစားဆိုင်မှာ စားနေရင်း မဝံ့မရဲနဲ့မီနူးတောင်းနေလို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ အဝစားဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာ စားနေရင်း မဝံ့မရဲနဲ့မီနူးတောင်းနေလို့ မေးကြည့်တော့မှ အံ့သြယူရတယ် ကျနော် တော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားပြီးမှဒီပိုစ်ကိုတင်တာပါ ဂျပန်ကလာတဲ့သူငယ်ချင်းကိုထမင်းလိုက်ကျွေးရင်းအဝစား ဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာစားဖြစ်ကြတယ် ကျနော်တို့ရယ် တခြားအတွဲ နှစ်တွဲရယ်ရှိတဲ့ ဆိုင်ထဲကို အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်းနဲ့နံနံစော်စော် လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ခလေးလေးမိသားစုတစု မဝံ့မရဲနဲ့ဝင်လာပြီး ကျနော်တို့နားက စားပွဲမှာဝင်ထိုင်ရင်း မီနူးကိုစာအုပ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းနေတော့ စားပွဲထိုးလေးက […]
၁။ ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ပျော်ခြင်း၊ ၂။ ရွှင်ရွှင်ပြပြ အိပ်ရာနိုးခြင်း၊ ၃။ မကောင်းသော အိပ်မက်ဆိုးများ မမက်ခြင်း၊ ၄။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများ၏ချစ်ခင်မှု ရရှိခြင်း၊ ၅။ လူမှတပါး အခြားသော ပရလောကမှပုဂ္ဂိုလ်များ ချစ်ခင်ခြင်း၊ ၆။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော နတ်ဗြဟ္မာများ စောင့်ရှောက်မှု ခံရခြင်း၊ ၇။ […]